Glass fiber bụ ụdị inorganic na-abụghị nke ọla nwere ezigbo arụmọrụ. O nwere ọtụtụ uru dị iche iche, dịka mkpuchi dị mma, nguzogide ọkụ siri ike, nguzogide corrosion dị elu na ike dị elu dị elu, mana ọghọm ya na-emebi ma na-ada nkwụsi ike. A na-ejikarị eriri iko eme ihe dị ka ihe nkwado na ihe ndị mejupụtara, ihe mkpuchi eletriki na ihe mkpuchi mkpuchi ihe, bọọdụ sekit na mpaghara ndị ọzọ nke akụ na ụba mba. Performance: Expande ...
Ọ na-eme nke dị elu iko eriri eriri ákwà ntekwasa na polyurethane ngwọta. Pu nwere magburu onwe eyi eguzogide, oyi na-eguzogide, ikuku permeability, merela agadi na-eguzogide, ezi ọkụ na-eguzogide, waterproof na antistatic Njirimara. A na-eji ngwaahịa ahụ eme ihe maka ikpo ọkụ nke pipelines, anwụrụ ọkụ na mgbochi ọkụ na ebe ọha na eze, ime ụlọ na n'èzí ụlọ mma na ebe ndị ọzọ chọrọ nchebe ọkụ.
The aluminum foil mejupụtara iko eriri ákwà adopts pụrụ iche elu mejupụtara technology. Ngwakọta aluminom mebere elu dị larịị ma dị larịị, ọkụ na-enwu ọkụ dị elu, ogologo ogologo na ike ọdụdọ dị ukwuu
The akwa silica akwa refractory eriri bụ ụdị akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ inorganic eriri. Ihe silica ya dị elu karịa 96%, na ebe dị nro ya dị nso na 1700 ℃. Enwere ike iji ya mee ihe na 900 ℃ ogologo oge. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na 1450 ℃ maka 10 nkeji, na worktable ka nwere ike ịdị mma na 1600 ℃ maka 15 sekọnd.
A na-ekpuchi Vermiculite na akwa iko iko na-acha odo odo, ma a na-emepụta ihe nkiri na-echebe ya na akwa akwa iko, nke na-eme ka arụ ọrụ na-arụ ọrụ ruo 800 ℃ N'otu oge ahụ, akwa iko iko ahụ nwere nguzogide ọkụ siri ike na mmebi arụmọrụ na mmegide esemokwu, na arụmọrụ nhazi ahụ dị mma.
Igwe iko iko a na-etinye na graphite nwere ike ịrụ ọrụ na 700 ℃. Graphite ntekwasa iko eriri ákwà nwere magburu onwe esemokwu nguzogide na chemical corrosion eguzogide. Ya mere, graphite ntekwasa iko eriri eriri ákwà na-eji na ike chemical corrosion, acid na alkali eguzogide ma ọ bụ elu okpomọkụ gburugburu ebe obibi.
Fireproof electric ịgbado ọkụ blanket na tumadi mere nke fireproof na-abụghị combustible eriri na esichara site pụrụ iche usoro. Ihe ndị dị mkpa: na-enweghị ike ịgbagha, nnukwu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ (550 ~ 1100 ℃), usoro kọmpat, enweghị iwe, ọdịdị dị nro na nke siri ike, dị mfe iji kechie ihe na ngwa ngwa.